Gingde blọgụ na South Africa | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 21, 2010 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Izu a bụ ihe ịtụnanya dị ịtụnanya. Mụ na Chantelle gara akwụkwọ akwụkwọ gọọmentị mbụ anyị na-edebanye aha na ndị egwu dị egwu sitere na Wiley na Bọọgụ Indiana. Ọ bụ ezigbo ndị na-ekiri ndị na-ekiri akwụkwọ! M wee na-eji ụbọchị na-eme ememe na ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-akwado, aka na enyi m na afọ - ọtụtụ depụta! Enwere m nnọọ ekele!
Ekem - ụbọchị ahụ ka mma mgbe m natara vidiyo Youtube a dị egwu Arthur VanWyk dee akụkọ, a na-elekọta mmadụ mgbasa ozi marketer, blogger na ika ọkwọrọikọ si South Africa. Mụ na Arthur jikọtara onwe anyị na Twitter. Amaghị m ma akwụkwọ a ọ ga-adị na South Africa ma ọ bụ na ọ gaghị enwe ya mere anyị nyere iwu maka ya. Na o wepụtara oge iji kelee anyị ma tinye vidio a mere n'ezie ka m dọkatụrụ ntakịrị ọ happinessụ!
Arthur - Enweghị m ike ichere ruo mgbe anyị ga-ezute otu ụbọchị ka m nwee ike idegharị akwụkwọ a n'onwe m ma nye gị nnukwu mmakọ. Made mere ụbọchị m!
Ozugbo anyị nwetara ohere, mụ na Chantelle ga-ezitere unu vidiyo!
Tags: Arthur vanwykakwụkwọ kacha mmaịde blọgụ akwụkwọịde blọgụ maka dummiesflannery nke chantelleụlọ ọrụ ịde blọgụụlọ ọrụ ịde blọgụ akwụkwọụlọ ọrụ ịde blọgụ maka dummieszuru ụwa ọnụ
Ihe ngosi: Ntinye aka na Nchọgharị Nchọgharị
Aug 22, 2010 na 9: 20 AM
Na ebe a bụ ihe ọzọ, ebe a na Greenfield Indiana! Daalụ Greg!